Maqaalkani waxa uu kasoo muuqday dhammaan macluumaadka loo baahan yahay in user u baahan yahay in uu ogaado si uu u saar la shaqeeyaan Samsung Kies 3 Mac. Ma badan oo inaga mid ah waxaa loo isticmaalaa in isagoo software ah ha oo dhan wareejinta shaqada noo sidaas darteed, habka mararka qaarkood waxay noqon kartaa xad-dhaaf ah. Si aad u hubiso in aad aysan ugu dhicin dabinka ah in xaalad kasta oo kale, Korka kafeega ah iyo billowdo akhrinta sida macluumaadkan la hubaa inuu u yimaado mid maalin anfacaya ama mid kale.
Waa maxay Kies Samsung u Mac?
Kies Samsung ayaa laba qeybood oo bixi karo; mid la jaan qaada Windows oo kale waa in la jaan qaada Mac. Version ee Samsung waa la socon nidaamka ka hawlgala Mac loo yaqaan Kies u Mac. Its warar version waa Kies 3, taas oo software si xor ah la jaan qaada OSX 10.5 iyo wixii ka sareeya. Kies 3 Mac lagala soo bixi karaa halkan .
Kies Samsung waa mid waxtar leh u isticmaala Samsung sida ay tahay mid fudud oo ah in la isticmaalo dadka isticmaala suuragelinayo in la lahayn knowhow farsamo muuqata in ay ku shaqeeyaan si sahlan. Waxaa soo dhan functionalities aasaasiga ah in user celcelis ahaan u baahan yahay. Waxaa caawiyo dadka isticmaala ee hanaanka wareejinta file dhexeeya Mac iyo Samsung. Waxa kale oo ay qaadataa daryeelka upgradation ee firmware iyo xallinta wixii dhibaato ah oo ku saabsan firmware ah.
Shuruudaha System: processor 1.8 GHz, Memory (Raam) 512 MB ​​lacag la'aan ah, Hard Drive Space Ugu yaraan 100MB
Sida loo soo dejisan iyo rakibi Kies u Mac on your computer
Kies 3 steup lagala soo bixi karaa link kor ku bixiyo. Furitaanka link waxay keeni doontaa in bilaabidda download ah Kies 3 faylka Mudanayaasha Mac. Marka download waa dhameystiran, gashato aad Mac adigoo raacaya tilmaamaha muuqda shaashadda.
Ka dib marka aad soo dajiyo Samsung Kies 3 aad Mac, waxaa lagu daahfuri iyo raac tallaabooyinkan:
Marka aad abuurtaan Kies 3 aad Mac, waxaad arki doontaa shaashad la mid ah mid ka mid ah hoos ayaa lagu muujiyey. Connect qalab Samsung in aad Mac isticmaalaya cable USB ah oo sug Kies 3 in la aqoonsado qalab aad.
Waxaad isticmaali kartaa saddex tabs muuqata sawirka soo socda si ay u maraan guud ahaan software ah. Tab ugu horeeyay ee ku tilmaamay "Warbixin Asaasi ah" bandhigayaa warbixin aad Samsung qalab tusaale ahaan ay model, firmware version ay iwm tab labaad ku tilmaamay "nidaameed" waxaa loo isticmaali karaa si ay u hagaagsan xogta aad u dhexeeya qalabka Mac iyo Samsung. Tab saddexaad, calaamadeeyay sida "kaabta iyo Soo Celinta" ayaa loo isticmaali karaa in ay dib u kor xogta ku saabsan qalabka Samsung in aad Mac. Gurmad Tani waxay markaas waxaa loo isticmaali karaa si loo soo celiyo qalabka Samsung ay mar kasta oo mustaqbalka.
Waxa aad isticmaali kartaa liiska hoos ku qoran si ay u maraan inta u dhaxaysa noocyada kala duwan ee macluumaadka ee aad qalab Samsung. Waxaad muujiyaan karaa sawiro ka Samsung si toos ah taleefan aad Mac. Sidoo kale, waxaad ka Samsung ciyaari karo music aad Mac. Waxaa intaa dheer, in aad xogta ka Mac wareejin kartaa qalab Samsung.
Kies u Mac sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa si ay kor firmware qalab ah. Laga soo bilaabo menu ugu weyn, dooro "firmware hagaajinta" si aad u hubiso haddii update ah ee la heli karo qalab aad.
S: Kies Samsung la Yosemite ma shaqeyn doono
A: Isticmaal Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) oo si buuxda u taageeri karaan Yosemite.
Wondershare MobileGo waa u fududahay ah si ay u isticmaalaan Tababaraha casriga ah, taas oo u waasiciyo ka functionalities kuwa is-hoosaysiiya bixiyo gudahood Kies Samsung. Waxay kuu ogolaanaysaa users dib ilaa qalabka ay, maareeyo xogta ku saabsan qalabka ay sidoo kale gadayo ama inuu helayo fariimaha qoraalka ah iyada oo aad Mac iyadoo wax dhibaato ah. Waxaa intaa dheer, waxay fududaysaa in dadka isticmaala si ay u maareeyaan barnaamijyadooda iyada oo ay Mac aad u fudud.
S: Sida loo uninstall Samsung Kies on Mac OS X Gacanta
Buugga rakibo u baahan tahay qayb ka ah dadaal sidii dhammaan faylasha la xiriira baahida loo qabo in software la doonayo in lagu tirtiro gacanta, mid mid. Tani waxay kor u qaada waxaa macquul ah in hal ama in ka badan files la xiriira software in la uninstalled in la joogo meel kala duwan lahaa oo aan is tirtiray laga yaabaa in siinayaa.
Si aad u tirtirto Kies Samsng on Mac OS X gacanta, raac tallaabooyinkan:
Finder Open, dooro "Tag" ka menu ugu sareeya, hoos u hay ah "alt" muhiimka ah si ay u arkaan folder qarsoon calaamadaysan sida "Library" iyo guji ku yaal halka "alt" muhiimka ah hoos u haysta.
Laba fayl "rabtid" iyo "Codsiga Support" magacaabay joogi doona halkaas. Si aad u tirtirto Samsung Kies ka OS X gacanta, waxaad u baahan doontaa in ay gacanta iskaan fayl kuwaas oo loogu talogalay jiritaanka files leh "Samsung Kies" in magacooda.
Si taxadar leh Delete dhammaan faylasha sida si looga fogaado files dheeraad ah qaadan meel xasuusta aad Mac ee.
> Resource > Mac > Xakamee Samsung Kies ee Mac Gebi